JingPad A1, piritsi rine JingOS rinovandudza kutenda kwedu mu mobile Linux | Linux Vakapindwa muropa
Zvirokwazvo iwe uchave unoziva kana ndikati "iro ramangwana reLinux pane nharembozha iri kuvimbisa, chero bedzi vanogadzira vasingasiye mapurojekiti avo" kana zvimwe zvakafanana. Uye icho chinhu chandinofunga kubva pandakatenga PineTab yangu: inovimbisa nekuti iwe unogona kuisa yakawanda software, kusanganisira desktop, asi haisi sarudzo panguva ino, kunze kwekunge iwe uri mugadziri kana uchida kuita yakakosha asiri-mushandisi kushandisa naye. Tichaona kuti zvese zviri sei mumakore mashoma, asi nhasi iyo JingPad A1 uye muranda akasima nzeve dzake zvakare.
Iyo JingPad A1 ndiyo iyo yekutanga JingLing piritsi re projekiti, ndiani anokura JingOS. Iyo inoshanda sisitimu yakavakirwa paUbuntu uye ine interface yakafanana chaizvo neiyo inoshandiswa muApple iPad, uchishandisa KDE software mukati, senge yayo Plasma Mobile. Zvatinogona kuisa parizvino paPineTab, kana sarudzo dzakanakisa, iArch Linux neMobian ine Phosh, chinongedzo chandisingadi ini pachangu, Manjaro zvakare nePhosh kana nePlasma zvishoma zvasara kana Ubuntu Bata iyo, Kunyange ini ndichifarira Lomiri, haigone kumhanyisa desktop desktop izvozvi.
1 JingPad A1 ichaburitsa mutengo wayo muna Chivabvu
2 Inoenderana neApple maapplication
3 Iyo JingPad A1 inodhura ...
JingPad A1 ichaburitsa mutengo wayo muna Chivabvu
Zvichida vamwe vashandisi vanofarira chidimbu cheruzivo: JingLing ikambani yeChinese, uye ini ndinotaura pane izvi kuitira kuti vasavimbe navo. Kutanga parutivi, ipiritsi iyo, pabepa, iri munzira iri pamusoro pePineTab mune specs, kunyangwe PINE64 inotibvumidza kuvhura / kuisa akasiyana masystem anoshanda, tisingataure kuti zvese, zvese software uye Hardware, ndeye mahara uye yakavhurwa sosi.
Kana zviri izvo zvinotsanangurwa neJingPad A1, inova protagonist yechinyorwa chino, isu tine zvinotevera:
11-skrini, AMOLED, 2368 × 1728, 266ppi, 4: 3. Ichave capacitive uye inoenderana nepeni.
Yako wega keyboard.
Processor 4 x ARM Cortex-A75 2GHz + 4 x ARM Cortex-A55 1.8GHz.
6GB ye RAM.
Makamera: 16MP iyo huru uye 8MP yekumberi imwe (iyo flash haina kutaurwa).
4G / 5G modem.
Ichabatsira Android maapplication.
Inoenderana neApple maapplication
Kubva pamusoro, pane zvinhu zvinoverengeka zvinomira pachena, senge RAM kana makamera, asi chinonyanya kundifadza ndechekuti ichatsigira Mapurogiramu eApple. JingLing haina kupa rumwe ruzivo nezve izvi, asi zvinoita sekunge ivo vakakwanisa kuisa chimwe chinhu chine chekuita neAnbox nekumira kuitira kuti JingOS yavo ikwanise kumhanyisa maapps kubva kuGoogle nharembozha pasina isu kuti tiwane hupenyu hwedu pachedu. Uye, mukufungidzira, piritsi rakadai, iine maratidziro aya, ine yakanakisa interface uye inokwanisa kumhanyisa Android maapplication anonzwika zvakanyanya.
Kana ari kiibhodhi mira, uye nekuona zvinoitika nePINE64, vashandisi vasiri vechiRungu kana veChinese vanotaura ini ndinofunga hatifanirwe kunge tine tariro yakawanda. Mune zvese zvingangoitika hapazove neyeSpanish vhezheni yeiyo yepamutemo, inova iyo, pasina kupokana, ichave iri yepamusoro Hongu panofanira kunge paine mamwe majenareta paAmazon pachawo, asi iwe unofanirwa kungwarira nesarudzo, sezvo isingavimbise kuti inoshanda zvakakwana (kunyangwe ichifanira).
Iyo JingPad A1 inodhura ...
Pachine zvinhu zvekuziva, uye kambani inozozvizarura muna Chikumi. Kwapera mwedzi, muna Chivabvu vachatitaurira kuti tingachengetera marii uye tenga iyo JingPad A1. Kana iwe uchifarira, iwe unofanirwa kunyorera kune Iyi link. La peji painokwidziridzwa, inotengesa chaizvo, ndokuti, inopenda zvese sekunge ndiyo sarudzo yakanakisa pamusika, asi isu tinofanirwa kuramba takakahadzika. Muchidimbu, nekuti hazvisi zvese zvavanotaura ndezvechokwadi: haisi yekutanga Linux piritsi iyo inosanganisira keyboard iyo yatinogona kubvarura, kana, kunyangwe ichisanganisira iyo nekutadza, haisi yekutanga inoenderana neStylus. Isu hatizive mashandiro aachazopa.
Chero zvazvingaitika, uye sezvandambotaura, ramangwana reLinux pamahwendefa rinotaridzika zvakanaka. Minwe yakayambuka kuti vagadziri havasiye mapurojekiti avo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » JingPad A1, piritsi rine JingOS rinovandudza kutenda kwedu mumahwendefa neLinux